कलियुगका कालिदासहरु ~ brazesh
November 24, 2013 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ११९
कालिदासको कथा तपाईहामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैले त्यो दोहो¥याएर तपाईहरुको समय खेर किन फ्याल्नु ? तर यहाँ आज कालिदासलाई सम्झिनु पर्ने कारण चाहिँ अर्कै छ । कालिदास कथा र किम्बदन्तीमामा मात्रै सीमित रहेनन् । रगतको थोपाथोपाबाट एकएक वटा अर्को दानव जन्मिने रक्तवीज जस्तै आजको हाम्रो समयमा पनि कालिदासहरु छ्याप्छ्याप्ती जन्मिएका छन् र हाम्रो वरिपरि देखिएका छन् । फरक कति मात्र हो भने, त्यो युगको कलिदास अज्ञानताका कारण आफू बसेकै रुखको हाँगो काट्थ्यो भने आजका कालिदासहरु जानीजानीकनै आफ्नो हाँगो काटिरहेका छन् । यो चाहिँ बडो उदेकलाग्दो कुरो हो । किन यसो गरिरहेका छन् त कलियुगका कालिदासहरु ?
आजका कालिदासहरु ज्ञान विवेक र सूचनाको प्रचुर विकास भएको युगमा बाँच्छन् । उनीहरुलाई कुन कुरा सही र कुन कुरा गलत हो भन्ने राम्रैसंग थाहा छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जेजे कुराहरु गर्न हुँदैन, उनीहरु त्यहीत्यही कुराहरु गरिरहेका छन् । लिंडेढिप्पीको कुरामा यिनलाई जित्न सक्ने कोही छैन । कलियुगका कालिदासहरु अरुको कुरा सुन्दैनन्, स्पष्ट देखिएको कुरालाई पनि नकार्छन् र विवेकहीनताको नयाँ मापदण्ड कायम गर्न कटिवद्ध रहन्छन् । आफ्नो कुकर्मले अरु कथि मानिसहरुलाई प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराहरुप्रति यिनीहरुलाई पटक्कै पनि चासो हुँदैन । दिग्भ्रमको सिकार भएर शक्तिले मैमत्त हुन्छन् कलियुगका कालिदासहरु ।
यस क्रममा उनीहरुको चर्चा हुन्छ र त्यो चर्चामा उनीहरु रमाउँछन् । उनीहरुले के बिर्सन्छन् भने, चर्चा देउताको जत्ति नै दानवको पनि हुन्छ । एउटा मानिसको विचार वा आचरणले अरु ठूलो वर्ग र जमातलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ भने त्यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो प्रभाव सकारात्मक हो कि नकारात्मक भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ र विवके भएको मानिसले त्यसको हेक्का गर्नुपर्छ । कलियुगका कालिदासहरुलाई चाहिँ चर्चा भए पुग्छ । उ आफ्नो भ्रमकै घेरामा यसरी रुमल्लिएको हुन्छ, उसले ती दुइको बीचको भिन्नता देख्दैन, बुझ्दैन ।
दुर्भाग्यको कुरा के हो भने, हाम्रो वर्तमान त्यस्तै कलिदासहरुले भरिएको छ । जतात्यतै उनीहरुको बाहुल्य छ । कुनै एउटा क्षेत्रमात्रै हैन । तर ती सबैलाई छोडेर अहिलेको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा चाहिँ सबैभन्दा ठूला कालिदासहरु त्यहीं छन् कि भन्ने लाग्छ । तिनीहरु मध्ये पनि अहिले कुरा गर्दा बन्दको नाममा आम मानिसहरुको जीवन कष्टकर बनाउनेहरुलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै कारण् देखाएर, जेसुकैका लागि भनिए पनि यस्ता बन्द आह्वान गर्नेहरुले जनताको सराप मात्रै खाइरहेका हुन्छन् । त्यसले उनीहरुको भएको जति लोकप्रियतालाई पनि धमिरा लगाइरहेको हुन्छ । उनीहरु प्रति सहानुभूति राख्न्ोहरु पनि वाध्य भएर उनीहरुका विरोधी बन्न पुगिरहेका हुन्छन् । कोही प्रत्यक्ष वा कोही अप्रत्यक्ष होलान्, फरक त्यति मात्रै हो । विद्यार्थीहरु स्कूल कलेज जान नपाउँदा, कर्मचारी कार्यालय जान नपाउँदा, व्यवसायीहरु काममा हिंड्न नपाउँदा, विरामी अस्पताल जान नपाउँदा र दैनिक मजदूरी गरेर पेट पाल्नुपर्नेहरुको आय बन्द हुँदा कुन समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने उनीहरुले बताउन सक्छन् ? किन आम मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्ने हकमाथि अंकुस लगाउन चाहन्छन् उनीहरु ? राज्यले कर्फयू लगाउँदा त्यो तानाशाही हुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणा गर्ने बन्द, जर्बस्ती, आगजनी र तोडफोड चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास कसरी हुन सक्छ ? आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक वा अरु केही भन्न चाहनेहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरुको अधिकार किन कुण्ठित गर्छन् ? बन्द घोषणा गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन् भने त्यसलाई टेर्न वा नटेर्न जनता स्वतन्त्र हुन नपाउने ? आफ्नो बन्दलाई नटेर्नेलाई सहिष्णुतापूर्वक लिएर सम्मान गर्न सक्ने हो भने तिनलाई जनताले नतमस्तक भएर अभिभवादन गर्नेछन् ।
हो समस्या देख्न सक्नुपर्छ तब न त्यसको समाधान सम्भव हुन्छ । तर रोग चिन्दैमा कुनै चिकित्सक राम्रो हुँदैन । अझ झन् रोग चिनेर गलत उपचार गर्न खोज्ने चिकित्सक त झनै डरलाग्दो हुन्छ । त्यस्तै समस्या देखाएर त्यसको साधान भन्दै अझ बढी समस्या निम्त्याउने अर्थहीन उपाय सुझाउने र जबर्जस्ती अरुलाई त्यो अवलम्वन गर्न लगाउन खोज्नेहरुलाई के भन्नू ?
तर चारतिरबाट उनीहरुको यो क्रियाकलापको विरोध र भत्र्सना हुँदा पनि जानीजानी आफूलाई किन कोही अलोकप्रिय बनाउन खोज्छ ? त्यसको पछाडि के कारण हुन सक्छ ? जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्ने तर जनताकै जीवन कष्टकर बनाउने कार्य कसैले गछनर्् भने हामीले के बुझ्ने हो ? के उनीहरुलाई जनताको कुनै मतलब छैन ? उनीहरु राजनीतिको नाममा अरु नै केही गरिरहेका छन् ? त्यो कारण के हुनसक्छ भन्ने कुरा केलाउने काम चाहिँ विज्ञ पाठकहरुकै हातमा सुम्पिन चाहन्छु । जसको हितका लागि भनेर उनीहरु डुक्रिन्छन्, तिनैलाई मारमा पारेर आत्मरतिमा रमाउँछन् भने हामीले बे बुझ्ने ? उनीहरुले हामीलाई बुझाउन खोजेको कुरो के हो ? दिन खोजेको स्पष्ट संकेत के हो ? के उनीहरुलाई जनता चाहिँदैन, जनताको समर्थन पनि चाहिँदैन ? जनताको बीचमा आफ्नो छवि के बनिरहेको छ भन्ने कुरासंग उनीहरुलाई वास्ता छैन ? आफैले काटिरहेको हाँगा उनीहरुको पनि टेको अडाउने ठाउँ हैन र ? त्यो हाँगा काटिएर खस्यो भने उनीहरु पनि भुईंमा खस्छन् भन्ने उनीहरुलाई थाहाह छैन र ? हैन त्यो सबै उनीहरुले बुझेका छन् र पनि यस्तो क्रियाकलाप गर्छन् भने उनीहरु भन्दा ठूलो को होलान् त कलियुका कालिदासहरु ?